हलिउड भ्यानिटी कारखाना - चीन हलिउड भ्यानिटी निर्माता, आपूर्तिकर्ता
हलिउड भ्यानिटी YF-D-1
उदात्त नेटलीको साथ तपाईंको भ्यानिटी क्षेत्रलाई बढावा दिनुहोस्! तपाइँको सर्वश्रेष्ठ भ्यानिटी सामान प्रदर्शन गर्न तपाइँको लागि प्रदर्शन तखताहरू प्रस्तुत गर्दै। नेटली दुई ठूला दराजले सुसज्जित छ जुन छाप भ्यानिटीको क्रिस्टल लक्स ड्रॉर नबहरूमा हाइलाइट गरिएको छ। एन्टि-टिपिंग कोष्ठकको साथ आउँदछ जुन तपाईंको सुरक्षाको लागि पछाडि स्थापित गरिएको हुन सक्छ। शिकंजा र प्लास्टिकको पर्खाल डोउल्स माउन्टको लागि समावेश गरिएको छ!
हलिउड भ्यानिटी YF-C-1
भ्यानिटी स्टोरेज एकाइहरू तपाईको भ्यानिटी सेट अपमा त्यो ठाँउ देखिनेका लागि! रमणीय यदि तपाईं यसलाई एकल एक्लो र कडा रूपमा आफ्नो मेकअप भ्यानिटी टैबलेटटप समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ भने। हाम्रो क्रिस्टल लक्स ड्रॉर नबसँग हाइलाइट गरिएका नरम-नजिकका ड्ररहरू सुविधाहरू।
YF-HY-55दराज
Draw ड्रअरहरू हलिवुड भ्यानिटी मिरर बल्ब र डेस्क सेट ब्लैकको साथ तपाईंको सानो अपार्टमेन्टमा अन्तरिक्ष समस्याहरूसँग डिल गर्न छ? के तपाईले कहिले आफ्नै एउटा कुनामा खोज्नु भएको छ? के तपाईंलाई तपाईंको सौन्दर्य प्रसाधनहरू, अत्तरहरू भण्डार गर्न थप ठाउँ चाहिन्छ?
बल्बहरू र डेस्क सेट कालोको साथ draw ड्रअर हलिवुड भ्यानिटी मिरर। यो हलिवुड ग्लैम सेटमा तपाईंलाई आवश्यक सबै थोक छ र अधिक।
सुन्दर तरिकाले हस्तनिर्मित, हाम्रो सबै भन्दा बेच्ने दर्पणको एक वैकल्पिक ठाठ आधार छ तपाईंको भ्यानिटी टेबल सुशोभित गर्न, वा यसलाई तपाईंको भित्तामा फिक्स गर्नुहोस् र जब तपाईं कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसबखत यस्तो देखिन्छ।
YF-HY-2 11 ड्रयर बिना सिसा
आजकल, भ्यानिटी टेबलले मूल्यको बारेमा उच्च मूल्यको फर्निचर आईटमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कसैले पनि एक प्राप्त गर्न रोक्दैन यदि तपाईं मेकअप भ्यानिटी खर्च गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने। घटनामा तपाई हाल व्यर्थको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, म दुई विकल्पहरू संकेत गर्न पाउँदा खुसी छु।
YF-HY-1 १ draw दराज
भ्यानिटी भव्यता मा एक अन्तिम कथन, हाम्रो विशेष पेटेंट हलिवुड फ्रेम अनौंठो, धेरै ठाडो, र आधुनिक डिजाइन को सुविधा बाट हलिउड ग्लैमर र साधारण परिष्कारको एक नयाँ ब्रान्ड विकिरण कि अनगिनत मेकअप प्रेमीहरु, पेशेवरहरु र सौन्दर्य ब्लगर्स प्रेम मा पर्दछ। हजारौं खुशी मालिकहरूमा सम्मिलित हुनुहोस् र तपाईंको दैनिक चमक दिनुहोस्!